BUUG PROF. SAMATAR KA QORAY TAARIIKHDII AADAN CADDE IYO CABDIRISAAQ XAAJI XUSEEN OO LA SOO BANDHIGAY – Somali Schools
BUUG PROF. SAMATAR KA QORAY TAARIIKHDII AADAN CADDE IYO CABDIRISAAQ XAAJI XUSEEN OO LA SOO BANDHIGAY
Kulan-cilmiyeedkan ayaa oo lagu qabtay Maanta Muqdisho ayaa lagu soo bandhigay buug xambaarsan sharafka iyo qaddarin ay lahaayeen Madaxdii hore ee Somalia. kaas oo loogu magac-daray “Africa’s First Democrats: Somalia’s Aden A. Osman and Abdirazak H. Hussen” ee uu qoray Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar, dhawaanna la dabacay.
Maadaama dalkeenna ay daashadeen colaado, abaaro, qaxooti, bara-kac, gaajo, musuq-maasuq iyo waxyaabo kale oo laga naxo oo kusoo dhaca dhegaheenna markii lasoo hadal-qaado Somalia, ayuu wuxuu ka hadlayaa doortkii madaxdii hore ay ku lahaayeen Hoggaaka Afrika..
Sidoo kale, Madasha waxaa soo Qaban-qaabiyay Machadka ISOS ee Cilmi-baarista Soomaaliyeed ee Jaamacadda Muqdisho, waxaana ka qayb-galay aqoon-yahanno iyo waxgarad kala duwan.
“Maktabadaha ayaan ku arkay Maqaallo yar-yar oo warbaahinta kusoo baxay sannadihii Lixdameeyadii oo Somaliya wanaag looga sheegayo. Daba-galkii hawshaas ayaa buuggan noqotay,” ayuu yiri Prof Samatar mar uu ka hadlayay qorista buuggiisan cusub oo muddo Sannado ah ay diyaarintiisu qaadatay.
Prof. Samatar ayaa sidoo kale faahfaahiyay cutubyada uu buuggu ka kooban yahay iyo nuxurka Xogta iyo Fikradda uu Xambaarsan yahay. Isagoo tilmaamay in buuggu tilmaamayo in madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Aadan Cabdulle Cismaan (Aadan Cadde) iyo Ra’iisul wasaare C/risaaq Xaaji Xuseen ay tusaale fiican u yihiin hoggaanka Qaaradda Afrika, isla markaana ku dhiirradeen inay dhisaan maamul wanaagsan.
Soo bandhigiddaas kaddib, ayay ka qayb-galayaashu waxay Qoraaga la wadaageen wixii su’aalo iyo faallo ah. wuxuuna kulankan ka mid ahaa barnaamijka “Cilmi-wadaag” ee uu sida joogta ah u soo qaban-qaabiyo machadka ISOS (www.isos.so) oo xaruntiisu tahay Muqdisho.
Ugu dambeyn, Machadka ISOS (Institute for Somali Studies) ayaa ah xarun cilmi-baariseed oo ka tirsan Jaamacadda Muqdisho; taasoo ka shaqeysa cilmi-baarista Soomaalida, Geeska Afrika ama Waddamada caalamka.
#AADAN CADDE #BANDHIG BUUG CUSUB #CABDIRISAAQ XAAJI XUSEEN